विज्ञान - Jhilko
उन्नत किसिमका मेसिनले अब डाक्टरको काम पनि गर्न थालेको छ । मुटुको चाल, मधुमेह, हिँडदा हिँडदै लड्ने लगायतका अवस्थाबारे जानकारी दिने काम मेसिनले गर्न थालेको छ ।
धार्मिक कथा अनुसार ब्रम्हाले भगिरथलाई ल लैजा गंगा भनेर दिएर भन्दा महादेवले ंगंगाको वेगलाई आफ्नो शिरमा धारण गरी केशले बाँधी दिशा दिएपछि धरतीमा पानी आएको कथा पढ्न पाइन्छ
रातो ग्रह मंगल ग्रहको पहिलो यात्री महिला
सुपर इन्टेलिजेन्ट बन्न चाहनु हुन्छ भने पाँच वर्ष पर्खनुस
उच्च प्रविधि (हाइ टेक) को जडान मानिसको दिमागमा छिट्टै गरिने र यसले दिमागलाई सक्रिय पारेर मानिसलाई सुपर हयुमन बनाइनेछ
रातो ग्रह मंगलमा प्राचीन पानी प्रणालीको प्रमाण
वैज्ञानिकहरूले रातो ग्रहको रूपमा चिनिएको मंगल ग्रहको सतहमुनि पानीको गहिरो भण्डार प्रणाली एक आपसमा जोडिएको पहिलो पटक प्रमाण फेला पारेका छन् ।
विज्ञान र प्रविधिको आजको युगमा नेपाली समाज कतातिर जाँदै छ ? हामी नेपालीहरुको मानवीयता के हो ? यो प्रश्न यतिबेला गम्भीर रुपले खडा भएको छ ।
अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले धरती बाहिर अन्तरिक्षमा रहेका जीवहरूको खोजी गर्न सकिने खालको एक डिएनएको निर्माण गरेका छन् ।
अहिले फोरजी नेटवर्कले यहाँको यात्रुहरूको चापबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छैन् । हरेक दिन यहाँ ३ मानिसको उपस्थिति हुन्छ ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा दुईटा एआई समाचार बाचक चिनियाँ समाचार संस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो । एक समाचार बाचकले अंग्रेजीमा बोल्ने गरेको थियो भने अर्को चिनियाँ भाषामा समाचार पढ्ने एआई समाचार बाचक थिए ।
उनले भने “मंगल ग्रह लगायत अन्य ठाउँमा पानी हुन सक्ने संकेत र जन्तु शृखंला हुन सक्ने ठोस संकेत फेला परेको छ । यसबाट एलियन हुन सक्ने सम्भावनालाई बढाएको छ ।”
आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाउँदा साइबर अपराध बढेर गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने,...
मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई नै कागजविहीन बनाउनका लागि ‘अफिस अटोमेशन प्रणाली’ ल्याउन तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहकार्यमा मन्त्रालयले उक्त...
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी (पिइसी) को १३औँ बैठकले नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालले लामो समयदेखि बर्खायाममा...
काठमाडौँको समस्या पहिचान गरी निराकण, नवीन र प्रविधिमैत्री उपायको खोजी गर्न कामपाले “स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा, २०७५” सुरु गरेको हो । प्रतिस्पर्धाका लागि समुदाय तथा वातावरण, सहरी पूर्वाधार विकास,...
प्रति दिन आठ हजार फेसबुक प्रयोगकर्ताको मृत्यु हुन्छ । मरेपछि वारिसले फेसबुक चलाउन दिन सकिने बताइएको छ । तर, यसमा केही शर्त भने छन् ।